Loza goavana ho an'i Afrika mipoitra ao Burundi amin'ny COVID-19?
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Loza goavana ho an'i Afrika mipoitra ao Burundi amin'ny COVID-19?
Nanokatra ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany i Tanzania ary tokony hahafantatra ny fivoarana mitohy any Burundi mpifanila vodirindrina aminy.
Tamin'ny volana aprily ny Birao fizahantany afrikanina Ny filoha Cuthbert Ncube dia nanentana an'i Burundi hanaja an'i Afrika ary hanaja ny loza ateraky ny COVID-19.
6 herinandro aty aoriana
Ny filoha Burundi Nkuruziza dia maty, azo inoana fa tao amin'ny COVID-19
Ny vadiny sy ny rahavavaviny: ao amin'ny ICU
Filoham-pirenena Burundi ho avy: ao amin'ny ICU
Ny mpandahateny izay tokony ho filoham-pirenena amin'izao fotoana izao: ao amin'ny ICU
Ny renin'ny filoha nodimandry ihany koa dia nodimandry.
Ny Repoblikan'i Burundi dia firenena mijanona amoron-tsiraka ao amin'ny Great Rift Valley izay mivangongo ny faritanin'i Great Lakes Africa sy Afrika Atsinanana.
Raha ny tatitra ofisialy dia 104 ny trangana Coronbavirus any Burundi. Fahafatesana 1, 75 sitrana. Tsy misy afa-tsy tranga 28 ao amin'ny firenena misy 11,872,554 olona, ​​saingy firy ny olona nozahana toetra? 382
Burundi dia ohatra tonga lafatra amin'ny fomba fahitana ny firenena an-dalam-pandrosoana, ary mety hanaitra ny zava-misy.
eTurboNews rnotaterina tamin'ny 10 aprily momba ny fomba itiavan'Andriamanitra an'i Burundi, ary ny fomba hiarovan'Andriamanitra ny firenena amin'ny COVID-19. Izany no antony namelan'ny filoha nodimandry hisokatra malalaka. Navela ny fivoriambe.
Tamin'ny volana Mey raha nitetika ny hisorohana ny fiparitahan'ny COVID-19 sy ny fitahirizany ireo firenena, dia nifidy i Burundi.
Ny filoha vonjimaika, Filoham-pirenena voafidy ary filoha voafidy, dia samy manana ny Covid-19 ao anatin'izany ny mpikambana ao amin'ny kabinetra sy ny Parlemanta.
Raha goavana io, tsy ho an'i Burundi ihany fa ho an'ny sisa any Afrika sy izao tontolo izao dia tsy maintsy mianatra avy amin'izany. Afrika sy izao tontolo izao dia tsy maintsy manaraka ny torolàlana momba ny fahasalamana mahazatra ho an'ny COVID-19. Tsy maintsy mahazo fanampiana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao i Afrika mba hanaovana fitiliana alohan'ny tara.
Izany dia hanamafisana ny zava-misy fa tena misy ny Covid-19. 55 taona ny filoha farany ary nodimandry tamin'ny fomba ofisialy noho ny aretim-po taorian'ny fitsapana nahazo ny Covid-19.
Ny fandaniana amin'ny dia any Etazonia dia naminavina fa handentika 45% amin'ity taona ity
Sidina 1,225 no nofoanana tao Beijing androany noho ny fiakaran'ny vaovaon'ny COVID-19 vaovao